Maxay tahay abaal-marinta uu ku guuleystay xiddiga Manchester City ee Kevin De Bruyne? – Gool FM
(Manchester) 29 Nof 2021. Xiddiga kooxda kubadda cagta Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaa ku guuleystay abaal-marinta kubbad-sameeyaha ugu fiican sanadkan 2021.
De Bruyne ayaa ku guulaysatay abaal-marinta kubbad abuuraha ugu fiican sanadkan 2021-ka oo ay bixiso Xiriirka Caalamiga ee Taariikhda Kubbada Cagta iyoTiro-koobyada ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano (IFFHS).
Isagoo halay 160 dhibcood, Kevin De Bruyne, Kubbad-sameeyaha Belgium iyo Manchester City ayaa loo caleemo saaray sanadkii labaad oo isku xigta abaal-marinta kubbad-abuuraha ugu fiican sanadkan 2021 ee ay bixiso IFFHS.
Kevin ayaa sanadkii 2020-kii ka horreeyey Lionel Messi oo ah 4 jeer ku guulaysta abaal-marinta ay bixiso IFFHS sanadihii 2015, 2016, 2017 iyo 2019, isagoo helay 55 dhibcood.
Xiddiga xulka qaranka Belgium ee De Bruyne ayaa abaal-marintan ku garaacay xiddigo ay ka mid yihiin Bruno Fernandes, Thomas Muller iyo Jorginho oo ka mid noqday shanta xiddig ee ugu sarreeyey abaal-marintan.
Bayern Munich oo diyaar ah inay qasnadaheeda u jebiso da'yarka Barcelona ee Pedri... (Waa immisa lacagta ay ku dooneyso wiilka-dahabiga?)